ကြက်သားကုန်းဘောင်ကြော် ~ သဘာဝရဲ့အာဟာရ
အခြားအသီးအရွက်တွေအများကြီးမပါပဲ..ကြက်သား ၊ ချင်း ၊ ကြက်သွန်နီ ၊
ကြက်သွန်မြိတ်...........................၅ ပင်( ၁ လက္မခန်.လှီး)
ချင်းသေးသေး.............................၁ တက်( အမျှ င်လှီး)
ခရုဆီ ၊ပဲငံပြာရည်အကြည် ၊ အနောက် ၊ တရုတ်မဆလာ
ကြက်သွန်နီကို ၄ စိတ် ( သို.) ၆ စိတ်ခွဲပြီး..အလွှာတွေကို ခွာထားပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးနဲ. ပန်းငရုတ်ပွကို လည်း ကြက်သွန်နီအရွယ်လှီးပါ။
မီးပြင်းပြင်းမှာ ဆီအနည်းငယ်နှင့်အတူ ပထမဆုံးကြက်သွန် တွေကို ခေတ္တ
ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ပန်းငရုတ်ပွတို.ကိုလည်းထိုနည်းအတိုင်းပြု လုပ်ပါ။
ချက်ချင်းဆိုသလို ပဲငံပြာရည် အကြည် ၊ အနောက် ၊ ခရုဆီ ၊ သကြား ၊ ဟင်း
ရေခမ်းပြီး..ဆီပြန်လာပြီဆိုမှ..ကြော်ယူစစ်ထားတဲ့ ကြက်သွန် ၊ ခရမ်းချ ဉ်သီး
ပန်းငရုတ်ပွ ၊ ငရုတ်ခြောက်တောင့်ကြော်တွေပေါင်းထည့် ၊ ကြက်သွန်မြိတ်
လေးထည့် ၊ တရုတ်မဆလာလေးဖြူးလိုက်ရင် အဆင်ပြေပါပြီ။